Etu esi enwetara Ebe E Si Nweta (Corporate)
Mepụta Onwe Gị na Aka Gị
Ntụziaka zuru oke na kredit ụlọ ọrụ, ịtọbe profaịlụ azụmaahịa azụmaahịa na ịnweta usoro nzere n'aka ndị na-agbazinye ego. Iwulite ego iji wuo azụmahịa adighi nfe iji aka gi, kama inwere obere enyemaka ị ga - enweta otuto ngbasa ozi ngwa ngwa karịa ka ị siri chee. Enwere ọtụtụ ihe iji zere yana ọtụtụ ihe dị mkpa a na-agaghị eleghara anya. Anyị na-ejide gị n'aka ma duzie gị n'ime usoro a gbagwojuru anya.
Kwadebe maka Usoro Buildinglọ Ọrụ Ebe E Si Nweta
Anyị na-edekọ usoro iji guzobe profaịlụ ebe azụmaahịa dị, rue ụzọ ịgbazinye ego n'ụlọ akụ, ọtụtụ kaadị akwụmụgwọ azụmaahịa na ọtụtụ kredit n'aka ndị na-ere ahịa. Ihe a niile na-amalite site na ịtọ ntọala maka ịmepụta profaịlụ akwụmụgwọ gị na usoro ntinye aka na ndị na-agbazinye ego, na-arụsi ọrụ ike gị. Ikwesiri igba mbọ hụ na azụmaahịa gị dị njikere maka usoro iji kredit akwụ ụgwọ - ọ bụrụ na ebido n’emeghị ọrụ ndị a, ị nwere ihe ibido ịmalite ma ọ bụdị jọọ njọ, kpachara anya na aha ọjọọ gị / nnukwu ihe ọghọm nke ndị na-eme mkpesa na-egosi. Ọ dị mkpa ịghọta ma mezue usoro ndị a iji wuo profaịlụ akwụmụgwọ azụmahịa gị.
Nzọụkwụ 1 - Nchọpụta Ebe E Si Nweta na Dunn na Bradstreet
Site na ịchọ D&B maka aha azụmaahịa, ị nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa ma ọ bụrụ na azụmahịa nwere otu aha nwere akụkọ kredit. Site na iji ọchụchọ dị elu, ị nwere ike ịchọ nchekwa data D&B na ọkwa mba. Gịnị kpatara ịchọ Dunn na Bradstreet ji dị mkpa? Ọ bụrụ n’ị mezue usoro ịzụ ahịa azụmaahịa ma mesịa chọpụta na ụlọ ọrụ nwere otu aha (ikekwe na steeti dị iche) nwere profaịlụ nzere na akụkọ ihe mere eme kredit dara ogbenye ma ọ bụ nke nwere nnukwu nsogbu, ị nwere ike ịchọta onwe gị iji merie nke ahụ mgbe nke gị A na-achọgharị ụlọ ọrụ.
Nchọpụta D&B azụmahịa
Ozugbo i kwenyesiri ike na aha azụmaahịa gị na D&B, ị nwere ike ịga n'ihu na usoro iwu otuto kredit. Ọ bụrụ na ịchọta ụlọ ọrụ nwere otu aha, ị nwere ike ịtụle ịgbanwe akwụkwọ ndekọ ụlọ ọrụ gị iji wuo otuto n'okpuru aha ndị na-adịghịrịị.
Nzọụkwụ 2 - Nchọpụta Aha Nnweta
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịlele aha gị gbasara ụlọ ọrụ niile edebanyere aha na mba ahụ. Can nwere ike ime nke a site na ịga na Steeti ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ kompeni, na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ ebe oku na-enyocha ma mata aha nnweta, ma ọ bụ nwee ike iji ngwa ịntanetị. Enwere ngwaọrụ ọchụchọ dị maka kredit na ndekọ ego yana ụlọ ọrụ azụmaahịa edebara aha. Nchọpụta a dị mfe ga-eme ka ị mara ma enwere ụlọ ọrụ azụmaahịa ọzọ edebanyere aha na-eji otu aha na steeti ọzọ.
Okwesiri ime nnyocha a n’enweghi onye choputara, nke putara na aha nke n’enweghi “Inc”, “LLC”, “Limited”, “Corp”, wdg. ozi ndekọ ọha, dị ka mgbe e hiwere ụlọ ọrụ, ụdị na adreesị ụlọ ọrụ edebanyere aha.
Nzọụkwụ 3 - Nyochaa Nleba Mmebi nke Akaramaahịa
You ga-achọ ileba anya na ebe nrụọrụ weebụ Trademark Electronic Search System (TESS) maka otu egwuregwu aha gị dabara adaba. Ofdị ajụjụ a ga-egosiputa ọtụtụ nsonaazụ. Ihe ị tinyere n’ime ya bụ mpempe akwụkwọ ma pịgharịa ya maka egwuregwu sara mbara. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ “Ebe Ego Azụmahịa”, ị ga-ahụ nsonaazụ dịka '' CU BIZSOURCE '' nke na-enweghị 'azụmaahịa azụmaahịa' n'aha ma ọ bụ nkọwa nke ngwongwo na ọrụ, agbanyeghị 'azụmahịa' na 'n'aka' bụ, nke ga-eweta nsonaazụ, ọbụlagodi enweghị ezigbo egwuregwu.
Sistemụ Nchọta Kọmputa Njirimara (TESS)
A ga-edenye aha ụghalaahịa ma ọ bụrụ na LIVE ma ọ bụ DEAD, na nke a, ịchọrọ ilele akara ụghalaahịa nke nwere ezigbo aha aha azụmahịa gị iji hụ na enweghị esemokwu. Ntụle ọzọ bụ na ekenyela aha ụghalaahịa, yabụ ị nwere ike ịnwe akara okwu maka ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ mpaghara gị ọzọ nwere ike ịdebanye aha otu ahịrị na otu ọzọ maka ebumnuche ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 4 - Search Name, Adres Weebụ
Youkwesịrị ịdebanye aha ụlọ ọrụ gị dị ka ngalaba, ọkacha mma na “.com” ndọtị. Lelee onye na-edebanye aha ngalaba ọ bụla maka nnabata aha ngalaba. Aha ngalaba gị nwere ike ma ọ bụ ghara itinye njirimara ụlọ ọrụ gị. Nke pụtara na ọ bụrụ na aha ụlọ ọrụ gị bụ “Ndị njikwa ọrụ kacha mma, Corp” ị ga-achọ ịdebanye aha “www.bestprojectmanagerscorp.com” ma ọ bụ “www.bestprojectmanagers.com” maka ebumnuche a.
Register.com ngalaba nnweta Check
Nke a ekwesịghị ịbụ aha ngalaba nke ụlọ ọrụ gị na-eji maka azụmaahịa. N'ịgbaso ihe atụ dị n'elu, ị nwere ike iji aha ngalaba ọzọ, n'agbanyeghị na ọ dị mkpa na aha ị ga-ewulite otuto n'okpuru aha gị.
Nzọụkwụ 5 - Ndepụta Ndepụta Nlekọ nke Superpages
Gbalịsie ike na ị nwere ndenye azụmaahịa na ndekọ azụmaahịa Superpages. Ọ bụrụ na ịmeghị, ị nwere ike ịmepụta otu n'efu. Nke a na-ewe naanị nkeji oge na-efu ihe ọ bụla. You nwere ike ịmepụta akaụntụ ma tinye azụmahịa gị na ndekọ site na isoro njikọ dị n'okpuru. Ọ bụrụ na ịchọta azụmaahịa gị, lelee hụ na emelitere ozi a na kọntaktị ugbu a yana nkọwapụta ọnọdụ gị.
Ndepụta Ntuziaka Azụmaahịa Superpages
Enwere ọtụtụ nhọrọ maka ịdebanye azụmahịa gị, maka ebumnuche a, naanị ịnwe aha azụmahịa gị na ndekọ na ozi kọntaktị gị ugbu a zuru ezu.
Ọ bụrụ na aha ụlọ ọrụ gị na-emegide nke nyocha ndị a dị n'elu, ị ga-atụle ịgbanwe ya. Enwere ọtụtụ nhọrọ ị nwere, sitere na DBA, edemede mmegharị na ịdebanye aha ụlọ ọrụ azụmahịa ọhụrụ. Can nwere ike ịkpọ ụlọ ọrụ 1-800-ma jụọ onye otu ahịa ka o nyere gị aka iji aha ọhụrụ. Tupu ịmechaa aha azụmahịa gbanwere ma ọ bụ debanye aha ụlọ ọrụ azụmahịa ọhụrụ, ịkwesịrị imecha usoro dị n'elu iji hụ na ị nwere ike iji ya wulite profaịlụ ebe azụmaahịa dị nchebe.
Gaba n’izo nke ozo >> Buildinglọ Ego poratelọ Ọrụ - Nkwupụta Businessdị Ọrụ Azụmaahịa >>
Nnyocha Ebe E Si Nweta Azụmaahịa
Ebe E Si Nweta na Corlọ Ọrụ Nhazi
Erite Uru Ebe E Si Nweta
Ajụjụ Ego banyere ụlọọrụ
Mmemme Ebe E Si Nweta
Ọnọdụ ego ụlọ ọrụ
Profaili Dun na Bradstreet
Profaịlụ Ebe E Si Nweta Equifax
Iwulite kredit maka ahia gi
Profaịlụ Ebe E Si Nweta Ahụ Ike
Njirimara Ebe E Si Nweta Gị